बम बिर्सिदाको बेहाल – Janaubhar
प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २६, २०६८ | 635 Views ||
०६१ को ग्रीष्मकाल । जेठको दोस्रो साता हुनुपर्छ सायद- हामी थियौँ तनहुँको पश्चिम क्षेत्र कालीगण्डकीको आसपास पहाडी गाउँमा । न कहिल्यै आएको न त जाने सुनेको ठाउँ नै । ‘आधारइलाका’ -रोल्पा) बाट पुग्नै त एक महिना लागेको थियो हामीलाई । सरकारी सेनाका दर्जनौँ घेराबन्दी र शाही क्याम्प नजिकैबाट उनीहरुलाई झुक्याउँदै दिनरात सबै बरोबरी ठानेर कति हण्डर र दुःख कष्ट झेल्दै पुगेका थियौँ हामी गण्डकमा ।
जानु थियो हामीलाई पूर्वी तनहुँमा । जहाँ सरकारी सेनाको उपस्थिति न्यून थियो । र, हामीलाई दुई/चार दिन सुस्ताउनु पनि थियो । तर, पूर्व जाने दुई-दुई पटकको प्रयास असफल भएपछि कता-कता डर लागेर आउन थालेको थियो भित्रैदेखि । कालीगण्डकीको किनार होस् या पहाडी क्षेत्रको कच्ची मोटरबाटो र सहायक नाकाहरु सबैतिर सेनाले बन्द गरेर बसेको थियो ।
लाग्थ्यो- कतै हामी उपलब्धिहीन, अनपेक्षित क्षतिको शिकार हुने त होइनौँ ? आवेगमा आएर वा हतास भएर अघि बढ्न खोज्दा वा पछि हट्न खोज्दा सेनाको फन्दामा परिने त हैन ? त्यतिखेर हामीले अलिकति सचेतता र सर्तकता गुमाएको भए …. सायद अहिले बाँचेका साथीहरुले हाम्रो नाममा पनि एक मिनेट मौनधारण गर्नका लागि घडिको सुई हेरिरहेका हुन्थे कि ?
गोल्ड स्टार जुत्ता, -हरियो कपडाको मिल्ट्री बुटबाट हामी ‘माथि’ उठिसकेका थियौँ त्यतिखेर ।) वान पोलार झोला, झोलामै झुण्ड्याइएको स्लिपिङ व्याग, नुहाउन, धुन नपाएको फुस्रो, मैलो शरिर र कपडाहरु अनि दुई मिटर टाढै भएपनि नाकमै ठोक्किन आइपुग्ने पसिनाको गन्ध….. । आखिर जति लुकाउन खोजे पनि माओवादी हुलिया कहाँ ढाकिन्थ्यो र ?
हुलिया लुकाउन नसके पनि दुई/चार दिन लुक्नैपर्ने भएको थियो हामीलाई । किनकि माओवादी जनसेनाको खारा आक्रमणको असफलतापछि सरकारी सेना गण्डकका पाल्पा, तनहुँ र स्याङ्जामा खनिएको थियो । स्थानीयबासीका अनुसार सेनाहरु भन्थे रे- ‘आजभोलि यता बन्दुकेहरु छैनन्, खारातिर गा’छन्, यी झोलेहरुलाई त लखेटी-लखेटी सिध्याइन्छ ।’ हुन पनि भएको थियो त्यस्तै । सेनाले हाम्रो अवस्था राम्रैसँग बुझेको थियो । र, ‘झोले’हरु खोज्दै निस्पिmक्रीका साथ दुर्गम गाउँ-गाउँसम्म पुगेको थियो ।
एकदिन अघिमात्र कालीगण्डकीको किनार करुवाटार पुगेर एकछिन सुस्ताउने, पानी पिउने र अघि बढ्ने मनसायले अघि बढेको हाम्रो टोलीलाई गोठालो बाले जंगलमै नरोकेको भए सायद हामीले पानी पिउन नपाउँदै सरकारी सेनाले हाम्रो ज्यान लिइसकेका हुने रहेछन् । धन्न ती गोठालो बा समयमै भेटिएर मृत्युको मुखैबाट हामीलाई फिर्ता गरिदिएका थिए ।
जेठको दोस्रो साता थियो । दिनभरको चर्को गर्मी, सेनाको घेराबन्दीबाट बच्न दिनभर स्थानीय कुमाल बस्तीमा छिपेर बस्यौँ । र, साँझ खाना खाइसकेपछि तेस्रोपटक पूर्वी यात्राका लागि झिटी गुन्टा बोकेर बाटो लाग्यौँ । आखिर जानु नै थियो- पहिलो र दोस्रोपटक जंगल र सहायक बाटो अपनाएर जाँदा फर्किनु परेकाले यसपटक मोटर बाटैबाटो जाने निर्णय भयो । बाटोमा आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्ने र रातभरमा जोखिमपूर्ण नाका पार गर्ने योजनासहित साँझ ८ बजेतिर नै हिडियो ।
विडम्बना, चैतदेखि नपरेको पानी त्यसै रात पर्नुपर्ने ? हिडेको एक घण्टा नबित्दै ठूल्ठूलो पानी पर्‍यो । एकातिर पानी, अर्कोतिर सेनाको तीव्र घेराबन्दी । हाम्रा लागि सबै शत्रु नै भैदिए । तैपनि माओवादी न परियो- प्रधान शत्रु र सहायक शत्रुलाई छुट्याउन जानेकै थियौँ क्यारे । प्रधान शत्रु (सरकारी सेना) बाट बच्न सहायक शत्रु (पानी)को उपयोग गरियो ।
पानी-पानीमा रुझेर के पाउनलाई गौडा कुरेर बस्थे र सेनाका जवानहरु । उनीहरुलाई हामीप्रति सद्भाव थियो/थिएन ? त्यो त उनैले जानून् । तर, उनीहरुले पानीमा रुझ्दै दुःख कष्ट बेहोरेर रातभर हामीलाई कुरिरहन सकेनन् सायद । त्यसदिन हामीले प्रयोग गरिरहेको बाटोमा उनीहरु बसेका रहेनछन् । हामी भने पानी-पानीमा रुझ्दै, भिज्दै प्लाष्टिक ओढेर रातभरमा जोखिमपूर्ण नाका र सेनाको घेराबन्दी पार गर्‍यौँ ।
जम्मा जम्मी २४ जनाको संख्यामा थियौँ हामी । सैन्य फौजसँग मुकाबिला गर्न हामीसँग त्यस्तो कुनै हातहतियार थिएन । थिए त मात्र- मादल, सारङ्गी, गिटार र त्यस्तै १०/१५ वटा सकेट बम । अनि केही बन्दोबस्तीका सामानहरु । त्यसैले हिड्दा सुरक्षा अवस्था ख्याल गर्दै केही परि आए पनि कम क्षति हुने गरी मुख्य टोलीलाई बीचमा पारेर ५०/६० मिटरजतिको दूरीमा ३ जना अगाडि हिड्ने र २ जना पछाडि हिड्ने गरी फर्मेशन मिलाएका थियौँ ।
फर्मेशनमा त्यस दिन म र एकजना रोल्पाली साथी ‘मुक्तिआहृवान’को जिम्मा पछाडि परेको थियो । साथमा दुई/दुईवटा सकेट बम बोकेर हामी टोलीभन्दा अलि पछि-पछि हिडिरहेका थियौँ- ताकि हाम्रो पीछा कोही लागेमा पत्तो पाउन वा पछिको गतिविधि बुझ्नलाई सजिलो होस् र पछिबाट आक्रमणै गरिहाले पनि मुख्य टोलीलाई क्षति पुर्‍याउन नसकोस् ।
झण्डै रातको १ बजेतिर तनहुँको रिसिङ रानीपोखरी भन्ने ठाउँभन्दा अगाडि पुगियो । त्यसभन्दा अगाडिको गाउँ पार गरेपछि स्थानीय साथीहरुले जोखिमपूर्ण नाका क्रस गरिएको भन्दै १५ मिनेटजति आराम गर्न भन्नुभयो । ४/५ घण्टादेखिको लगातारको हिडाई, वर्षे झरीलाई नै बिर्साउने मुसलधारे पानी, निस्पट अँध्यारोमा भेलले चिरा पारेका खाल्डाखुल्डीमा परेर ढल्दै, उठ्दै हिड्नुपर्दाको हालत र ‘बन्दोबस्तीका सामान’ अनि ‘आतंककारी दस्तावेज’ बोकेका गह्रौँ झोलाहरुको थिचाइले थिचिएका हामी यति थाकेका रहेछौँ कि आराम गर्ने भनेका त निदाउन पो थालेछौँ ।
१५/२० मिनेट आ-आफ्नो लाइनमै बसेर सुस्ताएका हामी फेरि गन्तव्यका लागि पाइला बढायौँ । थकान र निन्द्राले अर्धचेतजस्तै भएको मैले हातमा समाएको सकेट बम बसेकै ठाउँमा छोडेर हिडेछु । हिडेको त्यस्तै ५ मिनेटजति भएको थियो होला, आफैलाई केही छुटेजस्तो न केही हराएजस्तो कस्तो-कस्तो महसुस भयो । झोला छामेँ, गोजी छामेँ, यसो कम्मरतिर हात लिएको त गि्रनेड पर्समा एउटै मात्र बम छ ।
त्यसपछि पो निन्द्रा खुल्यो । लौ बर्बाद भयो, हातमा समाइराखेको बम त कता छोडिएछ कता ? सँगै हिडिरहेको साथी मुक्तिआहृवानलाई बम हराएको र भर्खर बसेको ठाउँमा छुटेको हुन सक्ने बताएँ । लिन जाउँ कि के गरौँ-गरौँ भयो ।
पछिबाट त्यत्रो टोलीलाई के भनेर रोक्न लगाउनु ? बम नै बाटोमा बिर्सेको खबर पठाए कमाण्डरले के भन्लान् ? नरोकेर एक्लै खोज्न जाउँ त पछि टोलीलाई भेट्न सकिएन र हराइयो भने ? न त कतै चिनेको ठाउँ, न जानुपर्ने ठाउँ नै थाहा छ । झन् त्यसमै चारैतिर सेनाको घेराबन्दी छ, गाउँ-गाउँमा सिआइडीहरु परिचालित छन् । अलिकति मात्रै तलमाथि भयो भने दुश्मनको पञ्जामा पर्न के बेर ?
तर, यतिका धेरै सोच विचार गर्ने समय नै कहाँ थियो र ? यता उता कतै नसोचिकन झोला सँगै हिडिरहेको साथीको हातमा दिएर पछिल्तिर यसरी कुँदे कि मानौँ म यो बाटोमा सयौँ पटक हिडिसकेको छु, जहाँ आँखा चिम्लेर पनि दौड्न सक्छु ।
त्यतिखेर सेनाको डर, त्रासभन्दा पनि बम भेटिन्छ कि भेटिन्न भन्ने सुर्ताले ओठ मुख सुकिसकेका थिए । एकातिर अनिकालको बेला बम हराउनु, अर्कोतिर त्यही बमका कारणले हुने सम्भावित मानवीय क्षतिको चिन्ताले म बेहोसजस्तै भएको थिएँ ।
अघिसम्म आएको पानी केही कम भएपनि आकाशमा बादलले पूरै ढाकेको थियो । पारि-पारि क्षितिजमा पहाडका काला ढिस्काहरुले आकाश र जमीनको फरक त्यही हो भन्ने छुट्याउन सक्ने बाहेक अरु केही देखिदैनथ्यो । म पहिले आएको बाटैबाटो दौडिए बेस्मारी ।
त्यस्तै दुई तीन मिनेटको दौडाईपछि जहाँ म बसेको थिएँ, त्यही पुगेछु, त्यसको एउटै संकेत म बसेको सिधै अगाडिको ठूलो रुख थियो । रुख के को हो थाहा भएन तर त्यही निशानाका कारण मैले बिर्सेर गएको बम यतै होला भन्ने अनुमान गर्दै भुँईमा छामछुम गरेँ । नभन्दै मसिना ढुङ्गा भएको जमीनमा अलि हात लाग्ने त्यही बम नै रहेछ । बम भेटिएपछि छाती ढक्क फुलेजस्तै भयो, शरिरभरि जिङरिङ्ग काँडाहरु उमि्रए, हातगोडा लगलग काँपे ।
Prevप्रथम भयो घोराही नगरपालिका
Nextभदौ १४ र सहमतिको खोजी
niekai ramro chha gaurab purna atit katahotalera jhaskaiyko chha.saral bhasama kata kata sankaraman ma bhuleraheka bastiparti sankraman mai moj gariraheka netaharule pani yk patak sabai hamra gaurab purna atit samjhanu parchha natra janata ra garib basti birsadako behal pheri lekhne thau nai rahane chhaina.
That’s heart touching story, I feel never tired reading such emotional life-like incidences in the form ofastory. I would like to thanks the writer for sharing the utmost experiences of his life.
एकातिर पानी, अर्कोतिर सेनाको तीव्र घेराबन्दी । हाम्रा लागि सबै शत्रु नै भैदिए । तैपनि माओवादी न परियो- प्रधान शत्रु र सहायक शत्रुलाई छुट्याउन जानेकै थियौँ क्यारे । प्रधान शत्रु -सरकारी सेना) बाट बच्न सहायक शत्रु -पानी)को उपयोग गरियो । पानी-पानीमा रुझेर के पाउनलाई गौडा कुरेर बस्थे र सेनाका जवानहरु । उनीहरुलाई हामीप्रति सद्भाव थियो/थिएन ? त्यो त उनैले जानून् । तर, उनीहरुले पानीमा रुझ्दै दुःख कष्ट बेहोरेर रातभर हामीलाई कुरिरहन सकेनन् सायद । त्यसदिन हामीले प्रयोग गरिरहेको बाटोमा उनीहरु बसेका रहेनछन् ।
really, dilli jee ko lekhai ramailo parako 6……. saral tara mutu chasakka banaune… it’s great.. lekhdai janus nirantar.
sabai ramrai6tara atankkari dastabej bhanne sabda hataunu paro
हजुरले झै सबै कम्ररेड हरुले सम्झे कोत राम्ररै हो तर के गर्ने दुख लाग्छ ति दिन मा नेताहरु ले बोलेका शब्द ति बेवहार कहां गए हजारैा शहिद भए शोसक र सामन्ति बाट मुक्त दिलाउने बचन जनतालाइ दिएको शहिद को बाटो कुन हो भनि सोध्दा अलमल परेकाछन यि नेता धिक्कार छ
yasta ghatanahatru herda aaphai hide jasto lag6